Home Wararka Deni oo khalalaase cusub ka abuuray Puntland & A. Karaash oo ka...
Deni oo khalalaase cusub ka abuuray Puntland & A. Karaash oo ka biyo diiday
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Karaash ayaa sheegay inuu sii dayndoono warbixin ku saabsan xaaladda guud ee Puntland. Hadalka madaxweyne ku xigeenka ayaa kusooo aadaya, maalin kadib markii madaxweynaha Puntland Siciid Deni uu Muqdisho u aaday doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Saciid Deni ayaa waxaa uu horay u sii qaatay mas’uuliyadii lagu maareyn lahaa Puntland, isaga oo ujeedadiisu tahay in uu labo shaqo oo isdiidan uu isaga kaliya wada maamulo. Markii uu Muqdisho aaday waxa uu horay u sii kaxaystay golahii wasiiraada iyo qaar kamida xildhibaanada Puntland. Tani waxa aut keentay in maamulkii Puntland uu gabi ahaan curyaamo.
Dhanka kale xalay magacaaabay xubno cusub oo katirsan golihiisa wasiiradda, sida wasiirka warfaafinta, arrintaas oo dhalisay hadal hayn badan oo siyaasadeed.
Magacaabidan ayaa horseedi karta khilaaf horeyba u jiray oo ku saabsanaa in madaxtooyada Puntland ay hoos u dhigayso meeqaamka madaxweyne ku xigeenka ku leeyahay talada iyo go’aamada Puntland.
Previous articleKoonfur Galbeed oo Shaaciysay Jadwalka Doorashada kursiga HoP#154
Next articleKhasaarihii ka dhashay dagaalkii Boosaaso (Deni & Diyaano) oo la soo bandhigay
Sharciyan Doorashada Golaha Shacabka waxaa qaban kara Aqalka Sare.